Mivory any Kroasia ireo minisitry ny fizahantany eropeana hampandroso ny fampandrosoana, ny fanavaozana ary ny fiaraha-miasa
Home » Ny olona ao amin'ny Travel & fizahan-tany » Mivory any Kroasia ireo minisitry ny fizahantany eropeana hampandroso ny fampandrosoana, ny fanavaozana ary ny fiaraha-miasa
Enga anie 29, 2019
Ny fanavaozana, ny fiaraha-miasa ary ny fitantanana ny isan'ny mpizahatany no mitana ny laharam-pahamehana amin'ny fivoriana 64 an'ny Komitim-paritry ny fizahan-tany eran-tany (UNWTO) ho an'ny Eropa, natao tany Zagreb, Kroasia tamin'ity herinandro ity (27-30 Mey).
I Kroasia dia nisafidy tamim-piraisan-tsaina handray ny fivoriana fanao isan-taona nataon'ny minisitry ny fizahantany ao amin'ny Firenena mpikambana ao amin'ny UNWTO any Eropa. Iray amin'ny tanjon'ny fizahan-tany ny firenena, mandray ny fahatongavan'ny 20 tapitrisa iraisam-pirenena amin'ny taona 2018, fiakarana 6.7% tamin'ny taona lasa. Mpiara-miasa matanjaka ao amin'ny UNWTO, ny firenena dia trano fonenan'i Zagreb Sustainable Tourism Observatory, ampahany amin'ny Network UNWTO Network of Sustainable Tourism Observatories.
Ny fivoriana dia natrehan'ny solontenan'ny firenena mpikambana mihoatra ny 40, ambaratonga avo lenta amin'ny fandraisana anjaran'ny Komisionam-paritra ho an'i Eropa. Nihaona tamin'ny praiminisitra Andrej Plenković ny sekretera jeneralin'ny UNWTO, Zurab Pololikashvili, noho ny fanoloran-tenan'i Kroasia hanao fizahan-tany maharitra. Nihaona tamin'i Ramatoa Marija Pejcinovic Buric, minisitry ny raharaham-bahiny sy eropeana ary Andriamatoa Pololikashvili, niaraka tamin'ny minisitry ny fizahan-tany Kroasia, Gari Capelli, ho an'ny dinika avo lenta momba ny fitantanana sy ny faharetana.
"Mampahery tokoa ny mahita tsy ny minisitra marobe fotsiny no tonga eto Zagreb, fa ny vavolom-pinoana fa tena hafanam-po koa ny fanjakana mpikambana eropeana hitantana ny fizahantany ary hampiasa azy ho mpamily fampandrosoana maharitra," hoy Andriamatoa Pololikashvili. “Ilaina ny fiaraha-miasa isam-paritra sy iraisam-pirenena hiatrehana ireo fanamby mifandraika amin'ny isan'ny mpizahatany, indrindra any amin'ny faritra an-tanàn-dehibe. Ny fivoriana tamin'ity herinandro ity tao Zagreb dia manaporofo ny faniriana hanao ny fizahan-tany ho hery ho an'ny tsara. ”
Ny minisitry ny fizahan-tany any Kroasia, Gari Capelli, dia nanampy hoe: «Tena mirehareha sy manome voninahitra an'i Kroasia nampiantrano ity fivoriana ity izy. Ny fizahan-tany dia motera ho an'ny fizotran'ny fanavaozana sy fampandrosoana maro, hery mamorona asa vaovao ary fitaovana ho fiarovana ny lova voajanahary sy kolontsaina. Ity dia fotoana lehibe ahafahana mitarika ny fironana sy ny politika amin'ny làlana tsara. Matoky aho fa hiaraka hitady ny valiny marina amin'ny fanontaniana misokatra rehetra isika ary hanamafy ny lalan'ny fizahan-tany mahomby sy maharitra ary etika. ”
Ao anatin'ny tontolon'ny fivoriana minisitra dia nivory ho an'ny atrikasa manokana momba ny fitomboana, ny fanavaozana ary ny fiaraha-miasa ny sehatra miankina sy tsy miankina. Ireo mpikambana ao amin'ny UNWTO Affiliate, ao anatin'izany ny Amadeus, ICCA, Niantic ary Google, dia nanolotra vokatra natokana hanatsarana ny fitantanana ny fizahantany sy ny faharetana.
Ankoatr'izay, ny sekretera jeneralin'ny UNWTO, Zurab Pololikashvili, dia nihaona tamin'i Davor Suker, filohan'ny federasiona federasiona kroaty, mba hiresaka ny fotoana natolotry ny tsena mitombo ho an'ny fizahantany ara-panatanjahantena.
Nihena ny tombom-barotra hotely eropeana mandritra ny volana fahadimy
Benchmark dia manendry ny filoha lefitra vaovao amin'ny fampandrosoana ny orinasa